Meicet - Iqela leeNjineli
Iinjineli ze-algorithm ye-AI
I-MEICET ine-patent yayo ye-algorithm --------Skin Cloud Algorithm.
Al Ukuzifundela, ukuphuculwa okubonakalayo, imizuzwana eyi-9 yokuxilongwa kwengcali.
Oku kwenza ukuba kukhutshwe eyona datha ichanekileyo kumfanekiso ngesayensi
IiNjineli zoYilo ezikwinqanaba eliphezulu le-UI
Sibeka ugxininiso olukhulu kuyilo lulonke lwentsebenziswano yabantu nekhompyuter, ingqiqo yokusebenza, kunye nojongano oluhle, ukusebenzisana nezisombululo ezitsha zokukunceda ukhulise ishishini lakho kwaye ugqame kukhuphiswano.
Iinjineli zoPhuhliso lweSicelo seSoftware
Iqela lethu lihambelana neendlela eziguqukayo zentengiso kwaye liphendula kuphuhliso olutsha lwesoftware.Kwaye sinokubonelela ngesoftware yohlaziyo lwasimahla kwi-3 ~ 6month ngeenkonzo zakho zangexesha.
Sisebenza kunye ne-Academy yaseTshayina yeSayensi, uyilo loYilo lomthombo wokukhanya wengcali Umthombo wokukhanya kobuso ugubungela i-95%;OEM, ODM ziyafumaneka.